विविध Archives - Page 10 of 42 - Purbeli News
रबिनाले किड्नी बेचेको घाउ समेत खोलेर देखाइन्, बुढाले छोरालाई खोलामा फाल्दे भने (भिडियाे)
रबिनाले किड्नी बेचेको घाउ समेत खोलेर देखाइन्, बुढाले छोरालाई खोलामा फाल्दे भने Purbeli TV
रूदै मिडियामा आइन रबिना,धोका दिने श्रीमानलाई यस्तो सन्देश।छोरालाई बचाउन यस्तो संघर्ष (भिडियाे)
रूदै मिडियामा आइन रबिना,धोका दिने श्रीमानलाई यस्तो सन्देश।छोरालाई बचाउन यस्तो संघर्ष Purbeli TV
चर्चित रियालिटी शो ‘टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपाल ’ बाट बाहिरिएकी बर्त गन्धर्व र श्रीमानबीच यस्तो प्रेम(भिडियो अन्तरवार्ता)
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ बाहिरिएकी बर्त गन्धर्व र श्रीमानबीच यस्तो प्रेम(भिडियो अन्तरवार्ता) चर्चित रियालिटी शो ‘टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ बर्त गन्धर्व बाहिरिएकी छिन । बाहिरिए संगै अहिले उनि आफ्नो श्रीमान् संग मिडियामा आएकी छिन । भने उनले प्रेमको बारेमा पनि बाताएकि छिन । उनले आफुले आफ्नो सोल्टा संग सानैबाट संगै रहेको र अहिले भन्दा ५ वर्ष अगाड...
किड्नी बेचेको आमाले थाहा पाए मर्नुहुन्छ भन्दै धर धरी रोइन रविना बादी, यस्तो छ अहिले उनको स्वाथ्य स्थिति (भिडियो सहित)
किड्नी बेचेको आमाले थाहा पाए मर्नुहुन्छ भन्दै धर धरी रोइन रविना बादी, यस्तो छ अहिले उनको स्वाथ्य स्थिति (भिडियो सहित) Purbeli TV
भाइरल जोडीलाई बाल बिवाहको तनाब, कहिले गर्छन त भईरल जोडीले बिहे ? (भिडियो सहित)
भाइरल जोडीलाई बाल बिवाहको तनाब, अब के गर्लान् ? फोन आएरै हैरान, अब कहिले गर्छन त भईरल जोडीले बिहे ? (भिडियो सहित) Purbeli TV
हे भगवान यस्तो त कसैलाई पनि न परोस ! श्रीमान हस्पिटलको शैय्यामा छटपटाउदै; श्रीमती २१ दिने शिशु च्यापेर आश्रममा (भिडियो सहित)
हे भगवान यस्तो त कसैलाई पनि न परोस ! श्रीमान हस्पिटलको शैय्यामा छटपटाउदै; श्रीमती २१ दिने शिशु च्यापेर आश्रममा (भिडियो सहित) Purbeli TV
झक्कड थापाको बुढा–बुढी बोलचाल बन्द, केकी अधिकारीलाई आईलब्यू भन्दा घरमा लफडा, श्रीमति रिसले चुर (भिडियाे सहित)
कुनै अन्र्तवार्ताको समयमा नायिका केकी अधिकारीलाई नाटकीय रुपमा आइृलब्यू भन्दा झक्कड थापालाई समस्या परेको छ । आईलब्यू भनेको भिडियो युट्यूबमा आएपछि उनकी श्रीमतिले झक्कडलाई गाली गरेको र अहिले सम्म श्रीमतीसंग बोलचाल नभएको खुलासा गरेका छन् । पहिलो पटक पोखरा आएका झक्कडले अन्र्तवार्तामा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । श्रीमती कम पढेकी र कलाकारीताको क्षेत्र न...
ईटहरी/ हिन्दुहरुको दोस्रो महान पर्व तिहारको आज मुख्य दिन भाईटिका । सबैको निधारमा साईतमै सप्तरङी टीका र माला सजिएको थियो । कतिपय कलाकारहरूले भने साईतमा टीका लगाउन पाएनन् । देशभर झिलि र मिलि भैरहदा देउसी खेल्नेहरुको ग्रुप पनि निकै देखियो । यस्तैमा सेलिब्रेटिहरुले पनि फुर्सद मिलाएर तिहार मनाएका छन् । हेर्नुस् एकै भिडियोमा दर्जन बढी कलाकारहरूको भाई...
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भाईटिका लाउदा जे देखियो (भिडियाे)
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भाईटिका लाउदा जे देखियो Purbeli TV
चितवनमा भेट्टिए भिन्न किसिमको मानिस, प्रहरीले किन लगे ? ..सामान्य मानिस भन्दा फरक
चितवनमा भेट्टिए भिन्न किसिमको मानिस, प्रहरीले किन लगे ? ..सामान्य मानिस भन्दा फरक Purbeli TV